पत्नी दुर्गाको नजरमा मोहनविक्रमका १५ गुण कस्ता ? हेर्नुस् - Everest Dainik - News from Nepal
पत्नी दुर्गाको नजरमा मोहनविक्रमका १५ गुण कस्ता ? हेर्नुस्
दुर्गा पौडेल नेकपा (मसाल)बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाकी एक मात्र सांसद हुन् । ०४२ सालदेखि राजनीतिमा लागेकी दुर्गाको ०५७ सालमा मोहनविक्रम सिंहसँग बिहे भयो । त्यसपछि उनी पार्टीका महामन्त्री सिंहकी श्रीमतीका रूपमा चिनिन थालिन् । दुर्गासँग मोहनविक्रमका गुणहरू जान्ने प्रयास गरेका छौं ।
१- महिलाको सम्मान गर्ने
उहाँसँग महिलालाई बढी सम्मान गर्ने दृष्टिकोण छ । अन्यलाई जस्तै मलाई पनि एकदमै सम्मान गर्नुहुन्छ ।
२- नराम्रो शब्द प्रयोग नगर्ने
उहाँले अरूमाथि नराम्रो शब्द प्रयोग गरेको मैले आजसम्म सुनेकी छैन । रिस उठ्ने कुरा कसैले गर्दा पनि प्याच्च केही भनिहाल्ने उहाँको बानी छैन । कसैले आएर वाइहात कुरा गरे पनि झर्किने गर्नुहुन्न । बरु, सुनेर आनन्द लिनुहुन्छ । कम बोल्नुहुन्छ । झगडा हुने स्थिति सिर्जना गर्नुहुन्न । उहाँलाई लम्बाइ–चौडाइ कुरा गर्न आउँदैन । आफूले कम बोल्नुहुन्छ, अरूका कुरा धेरै सुन्नुहुन्छ । अन्तर्यामी स्वभाव छ ।
३- पढ्ने र पढ्नमा प्रेरित गर्ने
उहाँ आफू पनि पढाइतिर एकदमै ध्यान दिनुहुन्छ । पाएको समयमध्ये अधिकांश समय अध्ययनमै बिताउनुहुन्छ । पढेरै समयको सदुपयोग गर्नुहुन्छ । अरूलाई पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ । यसो हेर्दा कोही मान्छे वा कार्यकर्ता पढ्ने जस्तो लाग्यो भने उहाँले किताबै दिएर पठाउने गर्नुहुन्छ । आफैँले खर्च गरेर धेरै कार्यकर्तालाई औपचारिक शिक्षाका लागि सहयोग गर्नुभएको छ ।
४- कार्यकर्ता गाइड गर्ने
पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको सन्दर्भमा पनि सहयोगी हुनुहुन्छ । पार्टीको काम र लाइन स्थापना गर्न कार्यकर्तालाई पूरै सघाउनुहुन्छ । कतै जानुपर्‍यो, नीतिगत विषयमा बोल्नुपर्‍यो भने पनि गाइड गर्नुहुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस मोहनविक्रम भन्छन्, ‘सरकारले भारतसँग आत्मसमर्पण गर्‍यो’
५- पढाइमा सधैँ सहयोगी
मेरो बुबा उतै भएका कारण मैले १ देखि ५ कक्षासम्म भारतको पश्चिम बंगालस्थित आसनसोलमा अध्ययन गरेँ । ६ देखि एसएलसीसम्म कपिलवस्तुको श्रीनगरमा । एसएलसीपछि लगभग नपढ्ने निधो गरेकी थिएँ । तर, उहाँकै कारण आइए मात्र होइन, बिए, एमएसम्म पढेँ । मैले पढ्न नचाहँदा पनि उहाँले कहिल्यै गाली गर्नुभएन । बिस्तारै क्रमिक रूपमा कन्भिन्स गर्नुभयो । राजनीतिमा लागेका कारण मैले प्राइभेट पढेकी हुँ । कलेज गएर क्लास लिन पाइनँ । एमएमा मैले राजनीतिशास्त्र लिएकी थिएँ । केही समय उहाँले घरमै पढाएका आधारमा फस्र्ट डिभिजनमा पास गरेँ । थेसिसमा पनि राम्रो गरेँ । मैले पिएचडी पनि गरूँ भन्ने उहाँको चाहना छ ।
६- परिवारवादलाई प्रश्रय दिनुहुन्न
मैले ०४२ सालदेखि नै सक्रिय राजनीति सुरु गरेकी हुँ । उहाँसँग ०५७ सालमा बिहे भयो । राजनीतिलाई निरन्तरता दिएँ । पार्टीकै छनोटअनुसार म प्युठानबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष चुनाव लडेकी हुँ । साथीहरूको सहयोगले जितेँ पनि । अरू पार्टीमा परिवारका मानिसलाई सिफारिस गर्ने, राजनीतिमा अघि बढाउने देखिन्छ । तर, उहाँले मलाई कहिल्यै पनि सिफारिस गर्नुभएन । यसको अर्थ उहाँ राजनीतिमा परिवारवादभन्दा टाढा हुनुहुन्छ ।
७- पदको लोभ छैन
उहाँमा धन–सम्पत्ति र ऐस–आरामको पटक्कै लोभ छैन । फाइदा हुने चिजको पछि कहिल्यै कुद्नुहुन्न । पदलोलुपता छैन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्ने सोच उहाँमा कहिल्यै आएन । उहाँ पदमा जानुभएन । सांसदसमेत कहिल्यै हुनुभएन । उहाँले यो चाहियो भनेर भनेको एउटा पनि कुरा याद छैन । मितव्ययी हुनुहुन्छ । अनावश्यक खर्च गर्न मान्नुहुन्न । उहाँ आफूले आफ्ना लागि केही पनि किन्नुहुन्न । लुगा–कपडा पनि अरूले किनिदिनुपर्छ । युरोप गएका वेला पनि उहाँले किताब मात्र किनेर ल्याउनुभयो । उहाँको सधैँ सादा र सरल जीवन छ ।
८ विपक्षीलाई व्यक्तिगत गाली गर्नुहुन्न
अन्य पार्टी र तिनका नेतासँग उहाँको सैद्धान्तिक मतभेद छ । तर, व्यक्तिगत गाली कुनै नेतालाई पनि गर्नुहुन्न । उहाँलाई विपक्षीसँग गाली गर्न पनि नराम्रा शब्द आउँदैनन् । सन्तुलित प्रकारले विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ । आलोचना गर्दा पनि उनीहरूले अपनाएका राजनीतिक लाइन यस कारण ठीक छैनन् भनेर वैचारिक ढंगले बोल्नुहुन्छ । उहाँका उखान–टुक्का पनि स्तरीय हुन्छन् ।
९ आँट दिनुहुन्छ
पार्टीका मूल दृष्टिकोणबारे हामीलाई प्रकाश पार्नुहुन्छ । सिद्धान्त बुझाउने काम गर्नुहुन्छ । अप्ठ्याराबीच पनि ज्वारभाटासँग जुध्ने आँट दिनुहुन्छ । संघीयताको विरोध गरेबापत हामीले धेरै ठाउँमा अपमानित र एक्लो पनि हुनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि आँट दिनुहुन्छ । यस्ता कुराले पछिल्लो समयमा मेरो राजनीतिमा सहयोग मिलेको छ ।
१० रक्सी–चुरोट मुखमा हाल्नुभएको छैन
उहाँ सरसफाइमा बढी नै ध्यान दिनुहुन्छ । नमिलेका सामान मिलाउनुहुन्छ । लुगा पनि सधैँ सफा लगाउनुहुन्छ । खुवाइ पनि सफा छ । खाने वेलामा पनि कचौरा मिलाएर राख्नुहुन्छ । जाँड, रक्सी, चुरोट, बिँडीजस्ता अम्मली पदार्थ कहिल्यै मुखमा हाल्नुभएन ।
११ सबै विषयमा अपडेट
उहाँ सबै विषयमा अपडेट हुनुहुन्छ । खेलकुददेखि चलचित्रसम्ममा अपडेट राख्नुहुन्छ । क्रिकेट, फुटबल अझै हेर्ने र पढ्ने गर्नुहुन्छ । टेनिसका महिला खेलाडीहरूको नामसमेत याद छ उहाँलाई ।
१२ प्रविधिमा पोख्त
८४ वर्षको हुनुभयो । मभन्दा ३७ वर्ष जेठो हुनुहुन्छ । तर, प्रविधि प्रयोगका हिसाबले उहाँ मसमानको उमेरको जस्तो लाग्छ । आइफोनदेखि ल्यापटप सबै चलाउनुहुन्छ । इन्टरनेटमै समाचार हेर्नुहुन्छ । नयाँ चिज सिक्न लागिहाल्ने उहाँको बानी छ । नेपाली टाइप गर्न पनि जान्नुहुन्छ ।
१३ परिवारलाई समय
राजनीतिज्ञले घर–परिवारलाई समय दिन गाह्रो हुन्छ । तर, उहाँले भने सकेसम्म दिँदै आउनुभएको छ । म बिरामी भएका वेला हेरचाहमा उहाँकै भूमिका प्रमुख हुन्छ । परिवारलाई अप्ठ्यारो परेका वेला सधैँ उहाँको उपस्थिति हुन्छ । हाम्रा दुई छोरा छन् । बच्चाहरू पनि बढी बाबासँगै लपक्कै हुन्छन् । उहाँ कसैलाई पनि ‘तँ’ भन्नुहुन्न । आफ्नै बच्चाहरूलाई पनि सधैँ‘तिमी’ भन्नुहुन्छ ।
१४ व्यावहारिक र दूरदर्शी
देशको वस्तुगत परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर उहाँ अघि बढ्नुहुन्छ । क्षणिक फाइदा हुने राजनीति गर्नुहुन्न । उहाँ व्यावहारिक राजनीतिज्ञ हो । उहाँमा दूरदर्शिता पनि छ । सिद्धान्तलाई जाँच्ने कसी व्यवहार हो भन्ने कुरामा उहाँ पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ ।
१५ ठूला नेतामा हुने भड्काव छैन
उहाँ सबैसँग समान व्यवहार गर्नुहुन्छ । भेट्न आउने जोकोहीलाई पनि उत्तिकै सहज तरिकाले समय दिनुहुन्छ । उहाँ ठूलो नेता हो । तर, उहाँमा ठूला नेतामा हुने भड्काव छैन । नम्र हुनुहुन्छ । भन्नैपर्दा, उहाँको फरक किसिमको स्वभाव छ, एकदम अलौकिक प्रकारको, जुन मैले अरू कसैको पनि देखेकी छैन । अरूको पनि हुन सक्छ, तर मैले नभेटेकी पो होला कि ? जे होस् आजसम्म भेटेका मानिसमध्ये उहाँको स्वभाव सबैभन्दा फरक छ । नयाँ पत्रिकाबाट साभार
याे पनि पढ्नुस यस्तो छ राजदूत सिफारिस गरिएकी अञ्जान शाक्यको वास्तविक कथा
ट्याग्स: Durga Paudel, Mohanbikram singh